मनीषा कोइरालाको प्रश्नः के सरकार नेपाली कै हो ?
काठमाडौं। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सोमबार राजधानीमा र्‍याली निकाल्ने क्रममा भएको झडपको विषयलाई लिएर अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पृथ्वी नारायण साहको शालिक अगाडि सरकारले आपत्तिजनक कार्य भएको बताएकी छन्।
सरकारले जनताको राष्ट्रिय एकताप्रतिको सामूहिक भावलाई सम्मान नगरेको समेत उनले बताएकी छन्। मनीषाले उक्त विषयलाई लिएर सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गरिन्। उनले लेखेकी छिन्, ‘मैले आशा गरेकी थिएँ कि जनताको राष्ट्रिय एकताप्रतिकों सामूहिक भावलाई सरकारले सम्मान गर्ने छ।’
‘तर उस्को व्यवहार ठीक उल्टो देखियो। पृथ्वी नारायणको सालिक अगाडि नै सरकार को यो आपत्तिजनक कार्य ? पानीको फोहरा र टियर ग्याँस सहित नै तैनाथ प्रहरीलाई पठाउने, सरकार के नेपालीको सरकार नै हो ?’ पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सोमबार राजधानीमा र्‍याली निकालेका राजतन्त्र पक्षधर र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।
सिंहदरबारस्थित पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गर्न अघि बढेका उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको हो। पृथ्वी जयन्ती वा राष्ट्रिय एकता दिवसप्रति मनीषाको चासोलाई धेरैले मनीषाको राजनीति प्रवेशको पूर्व तयारीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। तर, मनीषाले भने राजनीतिमा नलाग्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन्।
भारत-नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन फुटाएर डिजल चोरी, नेपाललाई कति घाटा ?